DOWNLOAD ASUS X53U ỌKWỌ ỤGBỌALA - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Download ndị ọkwọ ụgbọala maka laptọọpụ Asus X53U
Ndị ọkwọ ụgbọala dị mkpa na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaike ọ bụla ka mmekọrịta na sistemụ weere ọnọdụ n'enweghị ọdịda dị iche iche. N'ọtụtụ ọnọdụ, ha anaghị etinye aka, yabụ onye ọrụ ahụ ga-enyocha ma tinye ha na aka. N'isiokwu a, anyị ga-enyocha usoro ọ bụla nke ịchọta na ịwụnye ngwanrọ maka ngwanrọ laptọọpụ Asus X53U.
Download Asus X53U ọkwọ ụgbọala
A na-ekesa faịlụ niile dị mkpa n'efu, naanị ị ga-ahụ ha ma wụnye ha na kọmputa. Usoro nhazi ahụ bụ otu mgbe ahụ, ma ọchụchọ ahụ dị iche ma nwee ụdị algorithm dị iche. Ka anyị lee anya nke a n'ụzọ zuru ezu.
Usoro 1: Nkọwapụta ọrụ weebụ
Dị ka e kwuru n'elu, software ahụ enweghị ohere, na ngwá ọrụ na-ebunye ya na netwọk. Ụlọ ọrụ-onye nrụpụta nke laptọọpụ ahụ na-agụnye data niile n'ime ngalaba na weebụsaịtị ya, nke ga-enyere ndị ọrụ aka ịchọta faịlụ kwesịrị ekwesị. A na-ebudata ndị ọkwọ ụgbọala site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke usoro ASUS dị ka ndị a:
Gaa na ebe nrụọrụ weebụ ASUS
Mepee ihe nchọgharị gị ma gaa na isi ASUS peeji nke.
Kwuo "Ọrụ"imeghe menu ọzọ. E kwesịrị ịhọrọ "Nkwado".
Ịchọta eriri ọchụchọ abụghị ihe siri ike, pịnyere na laptọọpụ laptọọpụ gị ma gaa na ibe ya.
Na teepu meghere e nwere ihe ọmụma zuru ezu na ihe nke ihe nlereanya a. Pịa na ngalaba "Ndị ọkwọ ụgbọala na ọrụ".
Na mbido ị gaghị ahụ ndepụta nke downloads, ọ ga-apụta naanị mgbe ị depụtara sistemụ arụmọrụ.
Nzọụkwụ ikpeazụ bụ ịpị bọtịnụ. "Download".
Usoro 2: Asus Enyemaka Enyemaka
Ụlọ ọrụ ọ bụla nke na-arụpụta laptọọpụ ma ọ bụ mgbakọ kọmputa nwere uru nke ya, nke a na-eji nyochaa na wụnye mmelite ndị ahụ achọtara. Ọ bụrụ na ịhọrọ usoro a, ị ga-achọ:
Meghee isi akwukwọ nke ebe nrụọrụ weebụ na emeputa na menu "Ọrụ" họrọ "Nkwado".
Iji gaa akwụkwọ nlereanya akwụkwọ, tinye aha ya na akara kwesịrị ekwesị wee pịa nchọta ọchụchọ nke na-egosi.
Na taabụ nkwado nke ASUS X53U ị nwere mmasị na ngalaba ahụ "Ndị ọkwọ ụgbọala na ọrụ".
Nke mbụ, gosi na weebụsaịtị nke OS ị na-eji, nke mere na ọ bụ naanị faịlụ dịgasị iche iche na-emetụta.
Chọta uru na ndepụta nke meghere. "Mmelite Nwelite" ma budata ya.
Leta faịlụ ebudatara ma malite nrụnye site na ịpị "Na-esote".
Ọ bụrụ na afọghị afọ ojuju na ebe akọwapụtara iji chekwaa usoro ahụ, gbanwee ya na aka ọ bụla dị mma, wee gaa na windo na-esote wee chere ka echichi ahụ mezue.
Pịa bọtịnụ kwesịrị ekwesị iji malite ịlele maka mmelite.
Mgbe usoro ahụ zuru ezu, ihe niile fọdụrụ bụ iji wụnye ngwanrọ ahụ ma malitegharịa laptọọpụ ahụ.
Ọ bụghị usoro niile na-enye gị ohere itinye faịlụ achọrọ ozugbo, dịka ọmụmaatụ, usoro mbụ akọwapụtara, ebe onye ọrụ ga-ebudata ndị ọkwọ ụgbọala niile otu. Akpadoro mmemme puru iche, ndi oru ha na-etinye aka na usoro a, a na-akpo iji nyere aka tinye ihe niile n'otu ugbo. A na-atụ aro ka ị gụọ banyere ha na ihe ndị ọzọ anyị nwere na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Otu n'ime ndị nnọchiteanya kachasị mma nke software a bụ DriverPack Solution. Nanị usoro a ga-ejikọ na Ịntanetị mgbe ọ na-abịa na ntanetị. A na-arụ ọrụ nlele anya na-akpaghị aka, onye ọrụ naanị ga-ahọrọ ihe ga-arụnyere. Ntuziaka maka iji DriverPack nwere ike ịchọta n'okpuru.
Nhọrọ pụrụ iche nke akụrụngwa ọ bụla bara uru n'ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala site na iji usoro a. A na-eji njirimara ahụ mee ihe na saịtị pụrụ iche na nnukwu ụlọ akwụkwọ ntanetị. Naanị ị chọrọ ịma ID ahụ ma tinye ya na ibe ahụ, wee budata faịlụ kwesịrị ekwesị. A kọwara nkọwa banyere usoro mmejuputa usoro a n'isiokwu ọzọ.
Usoro 5: Standard Windows Utility
Windows sistemụ arụmọrụ nwere ọtụtụ ọnụọgụ bara uru na atụmatụ ndị ọzọ na enyere aka na kọmputa na-arụ ọrụ. Enwere otu ngwá ọrụ na-enye gị ohere ịchọta onye ọkwọ ụgbọala site na Ịntanetị ma ọ bụ na diski ike gị ma wụnye ya. Onye ọrụ naanị chọrọ ịhọrọ akụrụngwa ma malite usoro nwelite. Gụọ isiokwu dị na isiokwu a na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Anyị kọwara n'ụzọ zuru ezu nhọrọ niile dịnụ, otu esi achọta ma wụnye ndị ọkwọ ụgbọala na laptọọpụ ASUS X53U. Anyị na-atụ aro ka ị gụọ ha niile, wee họrọ nke dị mfe ma soro ntuziaka ndị enyere. Imejuputa mmezi nile adighi ewe oge na mgbalị.